Ny zava-drehetra momba an'i Melanotan-II / MT2
2. Melanotan-II ny valiny
3. Nahoana no malaza i Melanotan-II?
4. Manao risika ve i Melanotan-II?
5. Ahoana no ahafahako mampiditra dosim-pitsarana mendri-kaja toa an'i Melanotan-II?
6. Zarao ny loharano azo antoka Melanotan-II amin'ny aterineto
Melanotan II, alpha-Melanocyte mampirisika hormonina, Melanotan peptid, na MSH dia singa iray mampiavaka ny hormone peptide voajanahary izay tompon'andraikitra amin'ny melanogenese (dingana iray mahatonga ny pigmentation ny hoditra) ao amin'ny vatana.
Ny hormone peptide voajanahary novokarina sy voasesika dia matetika ampiasaina ho an'ny fahasalamana ara-pihetseham-po ary ny pigment mainty hoditra. Ny zava-mahadomelina dia anisan'ny taham-pahalalahana ara-dalàna amin'ny fivarotana, amidy ao amin'ny endrika volo izay naverina indray ho an'ny injections eo ambany.
I Melanotan II dia naorina tamin'ny 1990 tao amin'ny University of Arizona. Notarihin'ny mpahay siansa malaza Norman Levine, ekipa fikarohana izay tao ambadiky ny famolavolana ny zava-mahadomelina nampiasa sahona mba hanandrana ny fahombiazany sy ny fiarovana ny hormone fantatra amin'ny hoe Alpha MSH alohan'ny hampiasana izany amin'ny olona. Ny hormone dia nahatonga ny fanamafisana ny pigmentan'ireo sahona nampiasaina nandritra ny fanandramana.
Rehefa nanamafy ny fahombiazan'ny Alpha MSH amin'ny fanamafisana ny pigmentan'ny hoditra, dia nanova ny peptide Melanotan II izy ireo tamin'ny fomba izay mety ho hafanam-po amin'ny vatan'ny olombelona ary hametraka azy amin'ny fitsapana amin'ny klinika. Nandritra ny fitsapana dia nitatitra tamin'i Levine ny iray tamin'ireo olona nandray ny zava-mahadomelina fa niaina fanitsiana tampoka izy vokatr'izany.
Taorian'ny tatitra toy izany, dia nahavita fahombiazana hafa ihany koa ny ekipa mpikaroka, raha vao nahita izany Melanotan-II mandray soa dia miahiahy amin'ny fanandramana ny Bremelanotide (PT-141), fiteram-panafody mifehy ny dysfunction mifantoka amin'ny zava-mahadomelina. Ny peptide Melanotan II sy Bremelanotide dia samy niompana sy nahazo alalana ho an'ny orinasa ary ampiasaina amin'ny orinasa biotechnologie mba ahafahana mivoatra ho zava-mahadomelina mahasalama.
Melanotan II dia miasa amin'ny fampihetsiketsana ny mpikatroka melanocortin sasany, mitarika amin'ny fampivoarana ny lamosin'ny hoditra, fitomboan'ny libido ara-pihetseham-po, ny metabolism tsara kokoa ary ny fialana aina. Ao amin'ny fanadihadiana iray natao mba hanadihadiana ny fiantraikan'ny Melanotan 2 amin'ny fihinanana sakafo, dia nanamarika fa ny hormone peptide dia nanala ny melanocortin afovoany (MC) rehefa voatoto sy voatoto ny totozy.
Ny totozy ampiasaina ao anatin'ilay fanandramana dia nanamaivana ny lanjan'ny vatan'ny olona sy ny fiterahana taolam-paty taorian'ny fitsaboana naharitra enina andro niaraka tamin'ny peptide Melanotan. Ny voka-dratsiny koa dia nitarika ny fanafoanana ny tsimok'aretin'ny totozy.
Ny fikarohana dia marika mazava fa ny peptide Melanotan dia afaka manampy ny olona izay te handany lanjany, indrindra ny latsa-dranomaso sy ny lanjany, mba hampihenana ny tsiranoka sy ny fatran'ny kaloria.
2. Melanotan-II ny valin'ny fanadihadiana: Melanotan-II taloha sy aoriana
Andeha hojerentsika ny fanamarinana Melanotan-II nomen'ny olona nampiasa MT2 (121062-08-6).
Tammy: Ny asako dia midika fa mandany fotoana betsaka eny an-kalamanjana ary amin'ny fotoana iray, dia niaina masoandro aho. Tsy dia nampahazo aina loatra ny hoditro aho ary nanandrana ny ankamaroan'ny vokatra izay nilaza fa manome ny fiarovana ny masoandro saingy tsy nisy tamin'izy ireo nanome ahy ny valin'ny zavatra tiako. Natao tamin'ny MT2 ihany aho tamin'ny farany ary nahagaga ny vokatra. Manana fikorontanana izay tsy tsara tarehy aho fa manohitra ny fahasimbana amin'ny masoandro ihany koa.
Chris: Mazava ho azy, dia blondy misy rano aho miaraka amin'ny hoditra marevaka sy mampikorontan-tsaina. Na izany aza, na dia tsy nampahazo aina ahy aza ny fijeriko sy ny fahavoazako ho an'ny fahasimbana amin'ny masoandro, dia nisalasala be aho tamin'ny fampiasana tsimokaretina. Indray andro, nanapa-kevitra ny hiatrika ny loha olana aho! Raha ny marina, ny fiainana dia fohy loatra ka tsy mahatsapa ny tsy fahampiana. Nanapa-kevitra aho fa izao no fotoana Melanotan mividy ary nandeha androany taorian'ny asa. Izany no iray amin'ireo fanapahan-kevitra tsara indrindra nataoko teo amin'ny fiainako manontolo. Hainao..! Nahazo taovolo mena aho rehefa avy nitsidika seza 6. Tsy nino izany aho. Efa nampiasaiko izany hatramin'izao ny fivavahana ary tsy manenina na inona na inona.
Laura: Tiako fotsiny ity zavatra ity. Amin'ireo peptides ara-dalàna rehetra efa nampiasako hatramin'izay, dia i Melanotan-II ihany no nanome ahy ny zavatra notadiaviko - tanin'ny maizina sy maharitra. Indray mandeha isan-kerinandro aho ary vokatr'izany, dia mirehareha amin'ny hoditra be dia be aho. Ny Fasoracetam nootropic malaza indrindra: inona no omeny antsika?
Tsy toy ny teo aloha aho na dia nahazo solomaso aza aho na dia efa niposaka be aza ny masoandro, amin'izao fotoana izao ny hoditra dia tena manohitra ny olana toy izany. Ny hany olana natrehan'ny Melanotan-II izay dia niaina nandritra ny andro voalohan'ny fampiasana, fa ny olana dia nandao ny fotoana. Raha olona tena fotsy ianao ary te hanana tanim-potoana tsara, dia manoro anao aho hanandrana ity vokatra ity.
Famindram-po L: Efa nahita tovovavy tsara tarehy mihoatra noho izaho aho. Natahotra ny hampiasa ireo tsiranoka marokoroko aho teny an-tsena satria nisy tranga marobe nateraky ny fiantraikany ratsy. Nahazo herimpo aho hampiasa ny MT2 rehefa nahita ny fomba nanovako ny iray amin'ireo namako.
Rehefa nanomboka nampiasa izany aho, dia gaga aho nahita fa ny pesta Melanotan-II dia tsy narary toy ny niheverako fa ny fanjaitra ampiasaina dia tena bitika. Mieritreritra aho fa 1 mg ny hormona amin'ny hormonina roa isan'andro ary tsy mahatsiaro tena ny fanaintainana. Mba hanapahana ny tantara lava fohy, tiako ny zava-drehetra momba ity vokatra ity satria nomeny ny nofiko ny tanako. Noho izany dia faly aho amin'ny fahafantarako fa nihetsika tamin'ny dingana sasany aho noho ny homamiadan'ny hoditra.
Salome Clinton: Amin'ny maha-teratany irlandey ahy dia tena fotsy ny hodiko. Talohan'ny nahitana sy nampiasa ny peptide Melanotan, dia efa zatra ngeza be aho isaky ny fahavaratra. Saingy niova ny zava-drehetra mba hanatsarana kokoa ny fotoana nanombohako ny fitaterana an'i Melanotan-II. Ny tanin'i Melanotan-II alohan'ny fahavaratra sy ny fahavaratra dia mitovy. Tsy matahotra ny fahavaratra intsony aho satria ity vokatra ity dia manolotra ny hoditro ho fiarovana izay tokony hijanona tsy misy pentina mandritra ny taona. Izany vokatra izany dia azoko atao ny manolo-tena ho an'ny olon-kafa izay te-hampiditra ny tanany mahafinaritra amin'ny hodiny.
Tony: Mahaliana ny tantarako. Rehefa nihodina i 40 dia nihena be ny libido, angamba noho ny karazana asa nataoko. Nandany ny ampahany tsara kokoa tamin'ny androko aho, ary vokatr'izany dia voan'ny otrikaretina mahery vaika ny hoditra vokatry ny fipoahan'ny UV.
Raha nivezivezy tao amin'ny Internet aho, dia niondrika tamin'ny lahatsoratra momba ny tombontsoa avy amin'ny Melanotan-II. Gaga aho nahita fa nisy zava-mahadomelina izay afaka nanatsara ny libido ary nanolotra ny hoditra UV hoditra.
Raha nampiasa ny vokatra ho an'ny 10 volana aho, dia afaka matoky aho fa ny fahombiazan'izy ireo amin'ny fahaiza-manao. Izahay mivady dia mankafy ny fitiavanay tahaka ny nataonay tany am-piandohan'ny roampolo taonanay fony izahay nivady ary ny hoditro dia maizina kokoa. Tsy mahatsapa intsony ny solomaso intsony aho fa tsy ny hafiratry ny masoandro.
Sandra: Yeee! Afaka mankafy ny fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina aho amin'izao fotoana izao nefa tsy matahotra ny solifara, noho ny vokatra Melanotan-II. Zavatra tsy mbola nahafinaritra ahy nandritra ny taona maro izany satria ny masoandro dia tena tsy misy dikany amin'ny hoditra malalako.
Tsy afa-misaotra ny olona rehetra tonga miaraka amin'ity vokatra ity aho. Ankoatra ny hoditro dia manjary maizina ary ny endriko dia tsara tarehy. Nesoriko ny lanjany nandritra ny fotoana nampiasako ny zava-mahadomelina. Faly ery aho.
Raphael: Raha manana fotsy hoditra tena tsara ianao dia azonao tsara raha miteny aho hoe mety hitera-doza ny masoandro. Hatramin'ny fahazazako hatramin'ny herintaona lasa izay, rehefa nahafantatra momba ny MT2 aho, dia nanandrana nanandrana araka izay azoko natao mba hisorohana ny masoandro ary nampiasaina ny 50 + ho an'ny fiarovana UV saingy tsy nanampy betsaka izany.
Na eo aza izany rehetra izany, amin'ny fotoana iray manokana, indrindra mandritra ny fahavaratra, dia ho levon'ny masoandro aho. Tamin'ny taona lasa aho dia nahita momba ny peptide Melanotan ary faly aho nitatitra fa ity zavatra ity dia nanome ahy ny fiainako miverina. Nahatonga ahy hanangom-bokatra nandritra ny andro vitsivitsy nampiasako izany.
Efa naheno olona nitaraina momba ny fiantraikan'ny Melanotan-II aho nefa tsy niaina afa-tsy ny fitomboan'ny libido izay ho ahy manokana. Afaka mahazo fahafinaretana amin'izao fotoana izao aho na dia mandritra ny fotoana mampangatsiaka ny masoandro aza satria ny hoditra dia miaro tsara amin'ny loza voajanahary.
Khalid: Mampiasa an'i Melanotan-II foana aho aloha sy aorian'ny fiposahan'ny masoandro ary mahagaga. Ny olona mahalala ahy dia afaka mahatakatra ny fahasosoran'ny hodiko mandritra ny fahavaratra noho ny fahasimban'ny masoandro fa ankehitriny ny zavatra taloha.
Mijoro miaraka amin'ny hoditra matevina aho (izay efa nazava be teo aloha). Ankoatra izany, tsapako fa nitombo be ny libido ary tsy nitaraina intsony momba ny tsy fahafaham-po amin'ny firaisana ara-nofo ny vadiko. Manoro hevitra mafy aho ny vokatra.
3. Nahoana no malaza i Melanotan-II? / Melanotan-II tombony
Ao anatin'izany ny olona sasany dia miezaka manilikilika ny vidin'ny varotra, indrindra ny Melanotan-II, ary manilikilika ny olona amin'ny fampiasana azy ireo, ny ankamaroan'ny olona tsy manana pigment ary manana ny fanampiana Melanotan dia tsy afaka ny ho tony. Izy ireo dia afa-po amin'ny valin'ny Melanotan-II ary manohy mamporisika ny zava-mahadomelina amin'ny hafa. Vokatr'izany, mihamaro isan'andro ny alahelon'ny melanotan.
Ny tatitra iray navoakan'ny BBC tao amin'ny 2009 dia nanondro fa olona an-jatony no nitsidika ny fifanakalozana fanjaitra enina nandritra ny volana maromaro mba hahazoana fitiliana amin'ny fitantanana ny marina Melanotan dosages. Tao amin'ny 2010, ny Fikambanana Pharmacy Norvez dia nitatitra fa ny tiroida an'arivony dia nomena ny olona izay naniry ny handray fanapoizinana Melanotan-II. Ny tombony lehibe indrindra an'ny Melanotan-II dia ahitana hoditra maizina, manatsara ny libido sy ny fahaverezan'ny fatotra.
★ Poizina mainty
Ny fananana hoditra tena fotsy dia tsy zavatra maro tahaka ny toetran'ny bibikana no tena mora voan'ny kanseran'ny masoandro. Soa ihany, na dia teraka amin'ny hoditra malefaka aza ianao, dia afaka manampy fotoana bebe kokoa amin'izany ianao amin'ny fanafarana zava-mahadomelina azo antoka mba hampitombo ny famokarana pigment amin'ny hoditra. Amin'ny tranga tahaka izany, ny vokatra Melanotan-II dia tsy azo ovaina.
Namaly tamin'ny gazety Verdens, gazety norvezianina iray, momba ny fampiasana fitaovana Melanotan-II izy, Linn Connie Danielsen dia tsy nanamaivana ny teniny momba ny hoditra mainty Melanotan. Nilaza izy fa ny rongony hormona dia manome azy maharitra maharitra sy maharitra mandritra ny taona ary tena mirehareha amin'ny fijeriny. Nanampy izy fa ny fanafody hormonal dia mampihena ny fiantraikany mampihetsi-po amin'ny fahaverezan'ny masoandro mandritra ny ririnina.
Misy vokany tsara telo avy amin'ny Melanotan-II, fa ny lehibe indrindra dia ny fahafahana haka ny karazana hoditra rehetra na inona na inona firy taona.
Raha toa ianao ka tsy mahazo aina amin'ny halehiben'ny hoditra fotsy ary tiany hanome azy fotoana fanampiny, mila mahafantatra ny karazana hodinao ianao araka ny marika Fitzpatrick alohan'ny hanombohanao ny dia mankany amin'ny hoditra mainty Melanotan. Ny fahalalanao ny karazana hodinao dia manampy amin'ny fametrahana doses mahazatra indrindra an'ny Melanotan amin'ny karazana hodinao manokana.
Tsara ny manamarika fa ny olona ao amin'ny tontolon'ny sehatra Fitzpatrick (indrindra ny karazana 1, 2 sy 3) dia ireo izay mety hahatonga ny hoditra mainty tsara sy mora amin'ny mainty hoditra mainty hoditra indrindra ao anatin'ny fotoana fohy raha oharina amin'ny sisa .
Raha toa ka manana loko kely misy loko marevaka ny saka hoditrao, ny vokatr'ilay Melanotan-II dia hanampy anao hamantatra ny endriny mangatsiatsiaka raha raisinao tsara ny zava-mahadomelina. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho hitanao ny rambony ary ny sisa amin'ny hoditra dia mihamaizina kokoa. Amin'ny farany, hanana ny nofinao ny nofinao.
Zava-dehibe ny hitadidy fa ny Melanotan mainty hoditra Ny vokatra farany dia maharitra ela raha ampitahaina amin'ny fotoana mahazatra. Mazava ho azy fa rehefa mibaribary ny hazavan'ny masoandro dia mihamahavona kokoa ny pigment hoditra vokatry ny famokarana melanine mba hiarovana ny loko eo ambany hoditra (hypodermis) noho ny fanimbana ny taratry ny masoandro. Noho izany, ny asan'ny tanany dia toy ny ampinga.
Na izany aza, raha manana fotsy tena fotsy ianao, dia ho hitanao fa ny hoditra dia very ny fotoana ito noho ny fipoahana ny tara-masoandro dia maharitra mandritra ny herinandro vitsivitsy, indrindra ny iray na roa, raha vao mijanona amin'ny fipoahan'ny masoandro. Raha ny marina, ny hoditra dia tsy mila mamokatra fiarovana bebe kokoa (melanine) satria tsy misy masoandro ny manimba azy. Izany dia manazava ny antony nahatonga anao ho fotsy / fahazavana nandritra ny ririnina na raha mbola mijanona ao an-trano ianao.
Etsy ankilany, ny hoditra mainty hoditra mipoitra avy amin'ny tan peptides dia maharitra mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny tanin'ny voajanahary. Mandritra ny volana maromaro izy io dia tsy mitsahatra mitaratra masoandro. Ny mividy sy fampiasana an'i Melanotan dia ny hany ilainao mba hijanonana ho tsara tarehy amin'ny hoditra tsara tarehy, na inona na inona vanim-potoanan'ny fotoana.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny hoditra tena fotsy dia tena mora voan'ny homamiadana noho ny homamiadana iray. Raha jerena ny loza mety hitranga, ny tanjona voalohany nanamboarana an'i Melanotan II dia ny fisorohana na ny fampihenana ny mety ho voan'ny homamiadan'ny hoditra vokatry ny fampitomboana ny famokarana melanin. Semaglutide Effects Tahaka ny Peptide? TSIA, betsaka kokoa noho izany!
Tahaka ireo peptide hafa azo amidy, rehefa mandray ny fanampiana avy amin'ny Melanotan ianao, dia manentana ny vatanao hamokatra melanin amin'ny ambaratonga avo kokoa noho ny mahazatra. Satria ny melanine no fototry ny lokon'ny hoditrao, ny vokatra mitombo dia miteraka hoditra maizina.
Ny ankamaroan'ny olona malemy saina dia tsy mahazo ny hoditra izay maivamaivana noho ny mena mena. Izany no zava-misy! Tokony hadinon'izy ireo fotsiny ve ny mihamaizina kokoa noho izany?
Mazava ho azy fa tsia!
Satria noho ny Melanotan II, afaka mamela ny hodiny ho maizina izy ireo araka izay azo atao!
Amin'ny vokatr'izany dingana izany, i Melanotan II dia afaka miaro tsara ny hoditrao amin'ny fiatrehana ny fiantraikany ary hampihenana ny mety ho voka-dratsin'ny homamiadana.
★ Enhanced libido
Raha ny mikasika ny olana ara-pananahana, toy ny dysfunile erectile, ny olona sasany dia aleony mandamina azy ireo irery fa tsy mitsidika dokotera mba tsy hisalasala. Ny hafa dia tsy voavaly na tsy ampy antoka amin'ny fidirana amin'ny sampan-draharaham-pahasalamana momba ny fananahana.
Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fanafody fampivoarana ny firaisana ara-nofo dia tsy voatery mila dokotera dokotera tonga lafatra. Melanotan erectile levitra erectile levitra
Ankoatry ny famokarana vokatra voajanahary, ny Melanotan 2 koa dia mampitombo ny fanavakavahana ara-pananahana (libido). Ny lahy sy ny vavy izay te hiaina fiainana ara-nofo kokoa miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy dia afaka mampiasa ity fanafody ity. Izy io dia manome lehilahy marary amin'ny fampihenana ny erectileur ny fihenana mafy sy matanjaka kokoa ary manatsara ny firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy.
Izany dia zava-mahadomelina izay misy lehilahy maharikoriko dia afaka miankina amin'ny fahafinaretana ara-nofo izay mety ho azony. Izany no manazava tsara hoe nahoana i Melanotan levitra erectile dysfunction Ny tombontsoa dia tena mahazatra eo amin'ireo sokajy toy ny sehatra "gay".
Ankoatra ny fampitomboana ny kalitaon'ny fananganana amin'ny lehilahy iray, ny fanampiana avy amin'ny Melanotan dia afaka manome azy fantsona fanampiny ihany koa amin'ny fampihenana ny fotoana henjana. Noho izany, raha tianao kokoa ny famolavolana fitiavan-tena sy ny hoditra lehibe izay tsy dia marefo loatra amin'ny homamiadan'ny hoditra sy ny fandoroana masoandro, amin'ny fampiasana Melanotan II dia toy ny famonoana vorona roa mampiasa vato iray.
Na dia izany aza, ny tanjona voalohany amin'ny Melanotan 2 dia ny hoditra mihintsana ary noho izany, tsy izay rehetra mampiasa izany dia hiaina fiovàna eo amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Amin'ny tranga iray izay misy fiantraikany amin'ny firaisana ara-nofo ny zava-mahadomelina dia mety hahatsapa ny vokatra 1 hatramin'ny ora 3 ora aorian'ny fampiasana azy ny olona. Ny vokatra dia maharitra maharitra hatramin'ny 2 hatramin'ny ora 4.
Raha toa ka tsy te hiaina an'ity Melanotan 2 ity ianao dia raiso ny zava-mahadomelina alohan'ny hatoriany. Raha manao izany ianao, amin'ny fanaovan'ny zava-mahadomelina ny vatanao hampandrosoana ny faniriana hanao firaisana, dia tsy ho saro-pitenenana intsony ny atidohanao mba hikarakarana ny asa ilaina, ka tsy hahatsiaro ho manirery ianao. Raha tsy izany, afaka miandry fotsiny ny vokatra ianao ary manana fotoana tsara amin'ny fitiavanao.
Ankoatra ny fitomboan'ny libido, ny vokatry ny M2 hafa dia tsy fahita firy.
Tamin'ny andiam-pandrefesana test de Melanotan II natao tamin'ny totozy, ireo mpikaroka dia nahatsikaritra fa ny totozy nomena ny zava-mahadomelina nandritra ny fandalinana dia tsy ampy firy ny habetsaky ny tavy miparitaka be sy matavy amin'ny faran'ny vanim-potoana fitsapana raha ampitahaina amin'ny fomba nitondrany azy ireo teo aloha fitantanana ny zava-mahadomelina. Porofo mazava izany Melanotan-II fahaizany.
Noho izany, raha toa ianao ka ity vokatra ity ary tsy mahazo aina amin'ny lanjanao, ny fatran'ny fatotra Melanotan-II dia hamela anao hikirakira miaraka amin'ny endrika tsara sy tsara. Ny vidin'ny Melanotan-II dia tena mendrika ny tombontsoa azonao avy amin'ny zava-mahadomelina raha mbola avy amin'ny loharano malaza Melanotan-II.
Melanotan II dia manakana ny fialan-tsasatrao ary fomba iray hanampiana anao handevona fatina. Noho izany, raha mandray ny zava-mahadomelina ianao, dia mety hihinananao fa kely kokoa noho ny nampiasanao ianao ary ity fanampiana ity dia mihena be. Manampy anao hisoroka ny tsy faniriana tsy mety izany ary hifikitra amin'ny fihinananao tsy misy olana
Faharoa, voaporofo ny fahafahan'i Melanotan II hampihenana ny fihenan-tsakafo maimaim-poana amin'ny fitrandrahana. Izany dia fomba hafa ahafahan'ny M2 manampy anao hampihenana ny lanjan'ny vatanao.
Eny, tsy misy fiantraikany mahatsikaiky ny Melanotan-II izay efa nambara hatramin'izao. Na dia izany aza dia hita fa mety hisy olona sasany hiaina tsiranoka amin'ny tsimok'aretina mandritra ny dingana voalohany amin'ny dosie voalohany amin'ny Melanotan. Ny vokatra hafa mampiavaka ny Melanotan-II dia ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hafanana amin'ny tarehy.
Soa ihany, ireo vokatra tsy voajanahary ireo dia mety ho lasa mora kokoa amin'ny fotoana rehefa manitsy ny peptide ny vatanao.
Raha sendra zava-manan'aina tsy dia tiana ianao aorian'ny dose Melanotan, dia manova ny fotoana fandefasana anao minitra vitsy alohan'ny fandriana. Raha tsy manampy izany dia azonao atao ny mandray ny vokatra azo avy amin'ny histamine iray ora iray alohan'ny handraisana an'i Melanotan II mandra-pahatongan'ny vatanao ampiasaina amin'ny peptide. Raha te-hanohitra ny histamine voajanahary ianao dia afaka mandeha tsy misy fotony.
Safidy iray hafa amin'ny fiatrehana ny valin'ny Melanotan-II izay tsy voamarina dia manasaraka ny dosinao amin'izao fotoana izao ho an'ny dosages kely. Ohatra, raha mandray dose 1mg ianao, dia azonao atao ny mizara izany amin'ny dosage 0.5mg roa ary mitondra azy mandritra ny fotoana kelikely. Tsara ny manamarika fa mitombo ny fihenan-tsika amin'ny dosage; Ny habetsaky ny doka, ny henjana kokoa ny vokany.
Tsara ny manamarina fa ny loharano Melanotan-II dia tena marina alohan'ny hividiananao ny peptide satria misy mpividy miangona Melanotan-II. Amin'ny fanaovana izany, dia ho azonao antoka fa mampiasa ny zava-mahadomelina tena izy ianao, fa tsy zavatra mety mety hampidi-doza kokoa noho ny tsara amin'ny vatanao.
▲ Ny fanindroany ny tarehy
Ny fandosirana ny tarehatra dia mitranga ao anatin'ny 10 minitra eo amin'ny fandraisana an'i Melanotan II saingy maharitra mandritra ny fotoana fohy, raha oharina amin'ny ora. Na izany aza, dia tsy tokony hanahy mafy ianao raha toa ka miaina toy ny vokatra ratsy dia mety ho lasa lavitra amin'ny manaraka Melanotan-II injections rehefa ampiasaina amin'ny zava-mahadomelina ny vatanao.
▲ Ny hoditra hoditra, ny fihoaram-pefy ary ny aretina
Raha jerena fa misy ny mpamatsy aterineto Melanotan-II samihafa, mora ny mahazo mividy Melanotan. Ny fanamby dia tonga rehefa tsy mahazo torolàlana mety sy azo antoka ianao amin'ny fomba fitantanana ny zava-mahadomelina na raha tsy manaraka azy amin'ny taratasy ianao.
Ny Melanotan 121062-08-6 dia tonga amin'ny endritsoritra ary tokony haverina amin'ny rano mangatsiaka alohan'ny fampidirana azy. Noho izany, raha tsy ampiasaina ny rano mangatsiaka, dia mety ho voapoizina ilay zava-mahadomelina nampidirina ary mety miteraka olana ara-pahasalamana toy ny aretina izany.
Ankoatr'izay, ny fampiasana ny serfa dia tokony hadio sy tsy ho voaloto, raha misy aza ny fifanoherana na ny aretina dia mety hitranga amin'ny olona mahazo ny zava-mahadomelina. Ankoatra izany, raha tsy vitan'ny olona za-draharaha ny fitsaboana zava-mahadomelina, dia mety hitera-doza ny hoditra.
Ny vokatra hafa mahazatra ny vokatry ny Melanotan-II dia:
Amin'ny ankapobeny, ireo fiantraikany ireo dia vokatry ny famoizana loatra loatra. Noho izany, ny iray amin'ireo safidy hanamaivanana na hisorohana azy ireo dia ny mifidy ny doka ambany kokoa.
Ankoatra izany, dia misy vokany hafa ny sela Melanotan-II nandritra ny fitsapana lava, ary misy sombin-tsakafo maro kokoa, ny fanamafisana ny molotra ary ny fahamendrehan'ny fofom-bady.
Tsara ny manamarika fa hahazo ny tsara indrindra amin'ny valin'ny Melanotan ianao; Tokony hampiasa Melanotan-II ho fitsaboana maharitra ianao. Ny dingana voalohany dia tokony arahin'ny dosie fanampiny Melanotan ho an'ny fikolokoloana mandrapahatonga ny nofinanao hoditrao.
Ankoatr'izay, tsy maintsy miantoka fa tsy be loatra na kely loatra amin'ny zava-mahadomelina ianao. Mampiditra vola ampy fotsiny.
Raha jerena fa ny MT2 dia tonga toy ny vovo-poitra maina ampiasaina amin'ny fofona maimbo, ampiasaina am-bava maro, dia tokony ho afaka hamerina azy amin'ny fomba tsara ny fampiasana ny fifandraisana mety amin'ny rano mangatsiaka alohan'ny handraisana azy. Ny peptide Melanotan amin'ny fampiasana ny tena manokana dia amidy ao amin'ny 10mg voahidy ao anaty vovonana 3ml ary tokony halefa amin'ny 1ml na 2ml amin'ny rano mangatsiaka.
Raha toa ka tsy azonao antoka ny fahafahanao mamerina indray ny peptide marina dia azonao ampiasaina ny calculator peptide Lovemelanotan. Azonao ampiasaina ihany koa ilay fitaovana mba handraisana ny vokatra araka ny tokony ho izy.
Na dia misy fomba isan-karazany amin'ny fitantanana ny Melanotan-II 121062-08-6 isan'izany ny fanosehana (fantsom-bokatra) ary ny fitehirizana (fanafody melanotan), ary ny fampidirana, ny farany (fitsaboana) no tsara indrindra. Ny molekiolan'ny peptide ao amin'ny tsiranoka peptide Melanotan dia lehibe loatra ary noho izany, sarotra ho azy ireo ny miditra ny tendrontany.
Tsy mitovy amin'ny fomba fitsaboana ny tahan'ny fampidirana ny 100%. Rehefa tonga any amin'ny pilina izy ireo, dia tsy mahomby toy ny tsindrona noho ny enzyme ao amin'ny vavony izay mahatonga ny peptide tsy mavitrika. SARM fanampiny ao amin'ny Top 10: SR9009 (1379686-30-2)
Raha izany no fotoana voalohany noraisinao ampiasao Melanotan 2, dia azo atao tsara ny manomboka amin'ny ambany, indrindra amin'ny toerana rehetra ao amin'ny 50 mcg amin'ny 75 mcg ary avy eo dia mihamitombo tsikelikely avy eo miaraka amin'ny fotoana rehefa mamaritra ny fomba amalian'ny vatanao azy. Araka ny voalaza tetsy aloha, dia manombo ny fahafahanao mahazo ny olana iray an'ny Melanotan-II toy ny tsy fahamaivanana ny fanombohana amin'ny dose avo.
Ankoatra izany, andramo ny fizarana fotoam-bavaka mandritra ny fotoam-pirazanana mandritra ny minitra iray na roa raha ilaina izany mandritra ny andro voalohany, aorian'i Melanotan mividy fafana tsara kokoa. Izany dia satria ny fiterahana mandritra ny vanim-potoana lava rehefa voakarama ny hoditrao dia hampitombo ny fisavorovoroana sy ny firehetan'ny afo. Raha mihalehibe ny hoditra melaninina vokatry ny hoditra mainty hoditra, dia ho voaaro ny hoditra ka tsy ho mora vaky ho an'ny fofona sy ny masoandro mirehitra.
Raha vantany vao mamerina ny MT2 amin'ny fifantohana marina, dia izao no fotoana itanterahana azy, asa iray izay hampiasanao ny famonoana insuline. Ny zavatra iray izay tsikaritrareo mikasika ny filalaovana dia ny hoe tsy vitan'ny hoe kely fotsiny izany fa ao amin'ny IU (Internation Units). Raha ampiasaina ho ml, 100 IU dia mitovy amin'ny 1 ML. Noho izany, raha te-hitantana 0.3mls ianao dia hamatra ny zava-mahadomelina manomboka amin'ny marika 30 IU ao amin'ny seranana.
Andeha hojerentsika ny tokony hanaovana ny fampidirana.
Azonao atao ny mampiditra ny peptide Melanotan eo ambany hoditra (tsiranoka) na ao amin'ny hozatry (intramuscular); na aiza na aiza ahafahanao mihaona amin'ny vatanao. Atongilano ny hoditra miala amin'ny hozatra ary atsangano izany mba hamela ny fanjaitra hiditra ao amin'ny hoditry ny hoditra. Ny MT2 dia mipetraka ao amin'ny rà ary mihanaka eny amin'ny vatanao.
Tahaka izany no mitranga amin'ireo peptide hafa azo amidy, maro ireo mpamatsy ny Melanotan-II online sy ivelan'ny aterineto. Saingy moa ve izy ireo dia mivarotra ny tena vokatra ary ampiasaina ny vidin'ny Melanotan-II amin'ny vidin'ny vidiny? Ny valiny dia tsia.
Ny sasany amin'ireo mpamatsy Melanotan-II an-tserasera dia mivarotra sandoka Melanotan-II amin'ny vidiny mirary amin'ny vidiny mora indrindra mba hampitombo ny vidin'ny peptides amin'ny fandaniana ny sandan'ny mpanjifa tokony hivoaka amin'ny volany.
Amin'izay dia zava-dehibe ny manao ny zotom-po alohan'ny hisafidiananao ny loharano Melanotan-II. Na izany aza, satria mety tsy manam-potoana handalinana lalina ianao mba hanavaka ny katsatsaka sy ireo mpivarotra tena izy, dia tianay ny hamonjy anao ilay olana amin'ny fampahafantarana anao Phcooker.com.
Phcooker.com dia anisan'ireo azo itokisana indrindra Melanotan-II mpamatsy. Raha te hividy malalaka ny Melanotan-II (121062-08-6) ianao, dia loharano an'io Melanotan-II io ianao. Ankoatra izany, io no loharano tsara indrindra an'ny Melanotan-II ho an'ny vidin'ny fifaninanana mivoatra indrindra amin'ny Melanotan-II.
2019-05-11 ao amin'ny 8: 55 pm
Nanolo-kevitra ity tranonkala ity tamin'ny alalan'ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko aho. Tsy azoko antoka raha
Ity lahatsoratra ity dia nosoratany fa tsy misy olon-kafa mahafantatra izany amin'ny antsipiriany momba ny fahoriako.